Halehibe ara-toe-panahy aman-tsaina
"Izay milaza fa mitoetra ao aminy (Jesosy Kristy) izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa." 1 Jaona 2:6
"(Hoy Jesosy :) Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, raha mifankatia." Jaona 13:35
Nanao famakafakan-kevitra ny zanakay iray, ary nitanisa ny teny nambaran’i Jesosy Kristy hoe: “Araka izay tianareo hataon’ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa” (Lioka 6:31). Ny mpampianatra azy anefa dia nihevitra fa tokony hahitsy izany, ka hatao fehezanteny milaza fandavana: “Aza atao amin’ny hafa izay tsy tianao hatao aminao”. Marina ihany koa izany, hoy ianao! Angamba tokoa, saingy tsy lasa lavitra toy ny tenin’i Jesosy. Ny nampianariny ny mpianany dia tsy vitan’ny hoe tsy hanisy ratsy ny hafa, fa kosa hanisy soa azy ireny. Izany dia foto-kevitra ambaniana kokoa hatrany, ao anaty fiarahamonina misy antsika; ny hindrahindraina dia ny toe-tsaina tia fifaninana, matetika miaraka amin’ny fanaovana tsinontsinona ny osa, izay ailika.
“Omeo, dia mba homena ianareo ; fatra tsara sady ahintsana no afatratra ka mihoatra no homeny ho eo am-pofoanareo” (Lioka 6:38). Mbola tenin’i Jesosy ihany koa izany. Mifanohitra tanteraka amin’ny fahita matetika: fitiavan-tena sy toe-tsaina te hanana! Ny manankarena dia mihamanankarena, ary ny mahantra mihamahantra. Ny fampianaran’i Jesosy ve azo ampiharina ankehitriny, ao anaty tontolo mihamanome lanja hatrany ny isam-batan’olona? Tsia, raha toa isika tsy manana afa-tsy ilay toetra noraisina hatrany am-bohoka. Eny, raha toa isika manjary mpiray amin’ny fomban’Andriamanitra (2 Petera 1:4) noho ny finoana. Tsy afaka ny ho modely ho antsika Jesosy Kristy, raha ka tsy manana aina tahaka ny Azy isika. Amin’ny alalan’ny finoana ny anaran’Ilay Zanak’Andriamanitra no andraisana io aina io. Ry kristiana ô, satria efa nino Azy isika, dia aoka hiezaka mba ho hita taratra eny amintsika ireo toetran’i Kristy.